DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!! SEENAA Y.G(2005) kutaa 2ffaa Kutaa 1ffaa Mooraan qabsoo Oromoo xaliila’uun dirqama. Wal sukkuumee wayitti ba’uun isaa waan hin hafnee. Yeroo fudhachuun isaa namoota hedduu yaaddeessa. Garuu yaadda’uun barbaachisaa miti. Bilisummaan booda akka sudaan kibbaa takaalamanii nama kolfaa ta’uu irra, dhugaa jiru wal hubachiisuu , waan Biyya […]